Uzohlala noma uyahamba? Kuzocaca maduze ngoZinnbauer kwiPirates - Impempe
Uzohlala noma uyahamba? Kuzocaca maduze ngoZinnbauer kwiPirates
June 9, 2021 Impempe.com
Kuzocaca kuleli viki ngekusasa lomqeqeshi we-Orlando Pirates, uJosef Zinnbauer. Lo mqeqeshi uhlezi ngesinqe esisodwa kulo msebenzi wakhe ngemuva kokuhluleka wukulwela isicoco seligi.
UZinnbauer kulindeleke abe nomhlangano nezikhulu zePirates la azokwethula khona umbiko wakhe wesizini lingakapheli leli viki. Uzobe esebamba indiza eya kwelakubo isikhashana ngempelasonto. Kulindeleke ahaze ngezingqinamba ahlangabezane nazo nezenze ukuthi ahluleke ukubuya nesicoco seligi.
Nokho unalo ihhawu angavika ngalo lo mqeqeshi njengoba ebuye nayo indebe yeMTN8 kanti kwiDStv Premiership akubanga kubi kakhulu. IPirates iqede endaweni yesithathu kwilogi.
Nokulinyalelwa ngabadlali kuwuphazamise kakhulu umgqigqo weBucs kule sizini esanda kusongwa. Yaqala isizini izenzela nje kwamanye amaqembu kanti oZakhele Lepasa, Gabadinho Mhango noTshegofatso Mabasa babezitamuzela nje emagolini.
Kodwa babuye balimala kwaba wukubheda kwezinto ke. Kwathi sekupheshwa ngoThembinkosi Lorch phambili, naye walimala. NakwiCAF Confederation Cup akubanga kubi kakhulu njengoba ekhishwe esemzuliswaneni womkhumulajezi.
Konke lokhu kungaba yizinto azivikela ngazo lo mqeqeshi. Nokho uma kungaya ngokwezifiso zeningi labalandeli baleli qembu, uZinnbauer uzobe eseyalelwa ukuba aqoqe konke okwakhe abone afika ngayo.
Okungase kumlimaze wukuthi iqembu lakhe belibukeka linendlela eyodwa yokudlala, kuthi noma libona ukuthi ayisebenzi kodwa libambelele kuyo. LOkhu kwenze kwabukeka sengathi akanawo amasu ahlukene okubhekana nezindlela ezihlukene zokudlala kwezimbangi.
Ngokuthola kweMpempe, kulo mhlangano azoba nawo nabaphathi uZinnbauer uzophekwa nangemibuzo ngezinqumo zakhe. Kuzobhekwa nokuthi yikuphi afisa ukuba kwenzeke ukuze iqembu lenze kangcono ngesizini ezayo.
Previous Previous post: Akanandaba nabambiza ngesehluleki u-Erasmus
Next Next post: Litholwe linegciwane leCovid-19 iphini lomqeqeshi kwiBafana